Wasiirka Haweenka oo sheegtay inay dhameystiri doonaan sharuucda lagu difaacayo xaquuqda dadka Naafada ah. “SAWIRRO” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Wasiirka Haweenka oo sheegtay inay dhameystiri doonaan sharuucda lagu difaacayo xaquuqda dadka Naafada ah. “SAWIRRO”
Muqdisho-(SONNA)-Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Soomaaliya, ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya marwo Xaniifa Maxamed Ibraahim, oo ka hadashay xafladda daah-furka Hey’adda Naafada Qaranka ayaa sheegtay in shaqo badan la geliyay in maanta halkan la soo gaaro si loo helo Hay’ad u gaar ah arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba maadaama ay baahiyo badan qabaan.
Wasiir Xaniifa ayaa xustay in la dhameystiri doono shuruucda lagu difaacayo xuquuqda dadka naafada ah, waxaana ay intaa ku dartay in bulshada qaar takooreyaan dadka naafada ah, isla markaana loo baahan yahay in arrintaas meel looga soo wada jeesto.
Sidoo kale, waxay sheegtay in loo baahan yahay in xafiisyada iyo dhismiyaasha dowladda in loo sameeyo meelihii dadka naafada ah ka soo geli lahaayeen xarumahaas.
Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadaha Soomaaliya ayaa guud ahaan dadka naafadada ah ka codsatay in ay la shaqeeyaan xubnaha hey’adda, sidoo kalena hey’adaha iyo ururada kale in ay la shaqeeyaan hey’adda Naafada Qaranka.
Maxamed Jaamac Dhagaweyne, oo ah guddoomiyaha Hey’adda Naafada Qaranka oo ka hadlay munaasabadda daahfurka hey’adda ayaa sheegay in tiro koobka hadda la hayo ee dadka naafada ah ee Soomaaliyeed ay tahay 2.5 milyan, hase yeeshee tiradaas aysan rasmi aheyn.
Previous articleRa’iisul wasaare Rooble oo kulan la qaatay Gudidda Amniga doorashooyinka+”Sawiro”
Next articleDuqa Casimadda oo kulan la qaatay wasiirka Diinta iyo Hey’addaha ka shaqeeya qeybinta Udxiyada “SAWIRRO”